Cirbadaha dhiigga waxaa loo qaybiyaa:
1. Cirbado uruurin dhiig Subcutaneous ah: inta badan irbad saddex-af leh iyo irbad sal adag oo bir ah; Meesha maqaarka durugsan ama maqaarka asalka u ah cunugga cunugga si aad u hesho raad dhiig. Unugyada dhiigga iyo bayoolaji, taariikh, microbiological, virological, iyo baaritaano hidde; Waa mid aad u wanaagsan. Iyada oo la faafiyo aaladaha casriga ah ee wax lagu ogaado iyo qaababka loo adeegsado. Waa mid aad u ballaaran oo si tartiib tartiib ah u beddeli doonta baaritaannada badidooda ee ururinta dhiigga dhiigga xuubka leh.
2. Cirbadda sambalka dhiiga ee xididada dhiigga: aasaaso marinka u dhexeeya marinnada xididka aadanaha iyo dunida dibedda iyada oo la adeegsanayo faragelin, ka dibna ururinta saamballada dhiiga saamiga saamiga cadaadiska xun (oo loogu talagalay walxaha kala duwan ee tijaabinta, weelka saamiga cadaadiska taban ee tilmaamayaasha kaladuwan ayaa la isticmaali karaa - walxo kala duwan ayaa lagu hayaa weelka si loo dhammeeyo muujinta hore ee muunada); Tusaale ahaan, xinjirowga lidka ku ah, coagulation degdega ah, iwm.; Sida kudhisan qaabdhismeedka, irbadaha aruurinta dhiiga waxaa loo qeybin karaa labo qaybood: irbado dhiig ah nooca-irbadaha ah iyo cirbadaha nooca-dhiiga loo kala qaado. Dibadda si irbad ku saleysan, cirifka si loo kala qaybiyo.
3. Cirbadda sambalka dhiiga halbowlaha: Si adag u hadlida, waa aalad halbowle ah, xidid dhiig oo halbowle ah iyo aaladdeeda tuubada oo lagu dhammeeyo deegaan xiran; Marka laga eego aragtida qaab-dhismeedka, waa cirbado dhammaystiran oo leh sealant block, oo xirta irbadda dhakhso leh ururinta ka dib. In la ilaaliyo dhiiga halbowlaha ee dhammaan noocyada kala duwan ee waxyaabaha kale la kala beddelo ma beddelayo. Sida falanqaynta gaaska dhiigga, si loo fahmo shaqada wadnaha iyo xididada.
Marka loo eego fahamka kore, si sax ah ayey u dhihi kartaa, sida loo isticmaalo irbadda dhiigga:
1, irbado uruurin dhiig hoosaad ah: ka dib markii jeermiska maqaarka la jeexjeexo, faraha ayaa qabta irbadaha aruurinta dhiigga ee subcutaneous, celcelis qoto dheer oo ah 1-3 mm (waxay kuxirantahay bukaanka, maqaarka iyo unugyada), ka dibna isticmaal farta si tuuji goobta xabbadda ku dhacday, tuuji dhibic dhiig ah (oo aan daadineynin), adeegsiga nuugista kubbadda cadaadiska xun ee cadaadiska xuubka, ka dibna loo gudbiyo aaladda tijaabada ama shaandhada muunad-socodka barkadda, baarista dheeha; Adeegsiga, ogsoonow: hal qof, hal irbad, hal jeermis dilid, hal qashin qashin;
2. Cirbadda saamiga dhiigga ee cirbadaha: dooro xididdada ku habboon maqaarka ee jeermiska gudaha; Xir suunka cadaadiska (ogow: maahan meel loo dalxiis tago, mana aha suunka wadida dhiigga); Marka loo eego da'da bukaanka iyo tirada unugyada muunadaha la soo qaado, waxaa la xushay cirbado dhiig oo kala duwan irbadaha ku saleysan qalin waa in la doortaa haddii tirada ay ka yar tahay hal ama seddex tuubooyin); Waayeel ahaan, carruurtu ma shaqeeyaan ama xididdada dhiigga ee dhuuban, waxay dooran karaan qaab kala jaad ah; Dhexroorka irbadda muunad dhiig qaadista waa inuusan ka yarayn 0.7mm, haddii kale unugyada dhiiga ayaa si fudud loo jabin doonaa “hemolysis”. Kadib isticmaalka, irbadda waa in lagu tuuraa santuuqa qashinka qaaska ah si loogu tuuro. Xal u hel: hal qof, cirbad, jeermis dilis, qashin qashin;
3. Cirbadda sambalka dhiiga halbowlaha ah: (waa inay noqotaa aalad dhiig ururinta halbowlaha): si adag u-tallaalidda macnaheedu waxay noqotaa gacan-gooye; Diyaarso oo cadaadiso qalabka labiska; Ka dib markii lagu guuleysto halbowlaha halbowlaha, bastoolada saliingaha waxaa dib u riixaya cadaadiska halbawlayaasha, iyo dhiigga halbawlayaasha ayaa si dhakhso leh loo ursan doonaa, sida dhululuubka siliingerka; Ka dib markii la gaarey qiyaasta horay loo go'aamiyey, irbadda feedhka ayaa si dhaqso leh loo soo saarayaa waxaana halbowlaha halbowlaha lagu cadaadiyaa si loo joojiyo dhiigbaxa. Isla markii aad irbadda ku jiid ka dib, irbadda gelin wejigaaga. Kadibna muunadda halbowlaha dhiigga ayaa loo diray qolka baaritaanka si dhakhso loogu baaro.